မြန်မာပြည်ကို ဂျပန်လက်ကကယ်တင်သူ မောင့်ဘက်တန်
10 ก.ย. 2562 - 23:27 น.
ရေတပ်မှာ နှစ် ၄ဝ ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ မောင့်ဘက်တန်ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း သူနဲ့ ရေတပ်သားတွေ လိုက်ပါလာတဲ့ တိုက်သင်္ဘော ကရိကျွန်းနားမှာ ဂျာမန်ဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေနဲ့ တွေ့လို့ သင်္ဘောသားတဝက်ကျော် အသက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကို နိုဝယ်ကောင်းဝပ်က ကျွန်ုပ်တို့ အမှုတော်ထမ်းရာ ဆိုပြီး စစ်ဝါဒဖြန့်ရုပ်ရှင် ရိုက်ခဲ့လို့ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာလည်း ကန္ဒီမြို့မှာ ရုံးစိုက်တဲ့ မောင့်ဘက်တန်ရဲ့ စစ်ဌာနချုပ်အမည်ကို အစွဲပြုပြီး စစ်အပြီးမှာ တွင်ကျယ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကန္ဒီနဲ့ အိန္ဒိယက ဗြိတိသျှစစ်စခန်းတွေမှာ မြန်မာပြည်က ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးသမားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံဟောင်းနဲ့တကွ တခြား ဗြိတိသျှအရာရှိတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စစ်အပြီးမှာ ဖမ်းဖို့လုပ်တာတွေကို မောင့်ဘက်တန်က ဟန့်တားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မောင့်ဘက်တန်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ စစ်ပြီးခေတ် နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးမှာ လူမျိုးစုံ အလွှာစုံနဲ့ ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြောင်း ဝေလတက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် စီးပွားရေး ပါမောက္ခ အက်စ်ပီ ချက်ကရာဗာတီးက ရေးပါတယ်။
မောင့်ဘက်တန်ဟာ မြန်မာပြည် စစ်မျက်နှာ တိုက်ပွဲတွေကို ကွပ်ကဲခဲ့ရုံမက မန္တလေးနန်းမြို့ကို ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်မှာ သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ ၁၉၈ဝ က ထုတ်တဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ်မှာ ပါရှိပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ဂျပန်တပ်တွေ လက်နက်ချတာကိုလည်း သူပဲ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် ခွဲရေး ဆွေးနွေးစဉ်က လော့မောင့်ဘက်တန်
လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နှစ်မှာပဲ မောင့်ဘက်တန်က သီဟာသနပလ္လင်က အိန္ဒိယက ပြန်သယ်လာပြီး မြန်မာသမ္မတ စဝ်ရွှေသိုက်ကို အခမ်းအနားနဲ့ အပ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ဖဆပလ အစိုးရကလည်း နိုင်ငံမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မဘွဲ့နဲ့ မောင့်ဘက်တန်ကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့အလားတူ မြန်မာပြည် နောက်ဆုံးဘုရင်ခံ ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ်ကိုလည်း အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူဘွဲ့ ပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက် မောင့်ဘက်တန်ဟာ ဗြိတိသျှ ဘုရင်မရော ကြင်ယာတော်နဲ့ပါ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူမို့ ဝေလမင်းသား ချားလ်စ်ရဲ့ အဘိုးလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားရဲ့ ခေါင်းကိုင်ဖခင်နေရာမှာ ရှိတဲ့ မောင့်ဘက်တန်ကို ချားလ်စ်က အဘိုးတယောက်လို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ အယ်လဇ္ဇဘက် ဘုရင်မ နန်းသက်ငွေရတုပွဲက မောင့်ဘက်တန်
သူနဲ့ မိသားစု စီးနင်းလာတဲ့ ငါးဖမ်းလှေ ဗုံးခွဲခံရလို့ မောင့်ဘက်တန်နဲ့အတူ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မြေးတယောက်၊ သူနဲ့ခမည်းခမက်အမျိုးသမီးနဲ့ အကူတယောက်ပါ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သမီးကြီးနဲ့ သမက်အပြင် နောက်ထပ် မြေးတယောက်ကတော့ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
သူ့စျာပနကို မြန်မာပြည်က သမ္မတ ဦးနေဝင်း တက်ဖို့ ရှိပေမယ့် စင်္ကာပူမှာ ကျန်းမာရေးကြောင့် လှည့်ပြန်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့အစား ရေတပ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ချစ်လှိုင်နဲ့ တခြား မြန်မာ့တပ်မတော် အရာရှိတွေ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါတယ်။
သူကွယ်လွန်ချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအလံကို တိုင်တဝက်လွှင့်ထူ ထားရှိဖို့ ဦးနေဝင်းက ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ လွတ်လပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး နိုင်ငံတော်အလံကို တိုင်တဝက်လွှင့်ထူခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြန်မာပြည်ကို ဂျပန်လက်ကကယ်တင်သူ မောင့်ဘက်တန်